सम्पूर्ण जनशक्ति काेराेना नियन्त्रणमा लागेकाले महत्वपूर्ण उपलब्धि हात परेकाे सरकारकाे भनाइ | Hamro Biratnagar
गृह पेज स्वास्थ्य कोरोनभाइरस सम्पूर्ण जनशक्ति काेराेना नियन्त्रणमा लागेकाले महत्वपूर्ण उपलब्धि हात परेकाे सरकारकाे भनाइ
विराटनरग। कार्तिक ०५
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हात पारेको बताएकाे छ ।
नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हात पारेकाे बताएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे. एक वर्षको प्रमुख उपलब्धि उल्लेख गर्दै प्रवक्ता गौतमले कोरोना महामारी सुरू भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सकिएकाे बताएका हुन् ।
गाैतमले परीक्षण क्षमतालाई २५ हजारमा पुर्‍याएको र अस्पताल बेडलगायत आपूर्ति व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त बनाइएको जिकर गरे । उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले ४३ वटा मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनकाे भनाइ काेराेना र यसकाे परीक्षणमा केन्द्रित भएकाे कुरा नै प्राथमिकताका साथ जाेड दिएका हुन् ।
अघिल्लो समाचारकाँकडभिट्टा नाकाबाट मोरङ सहित अन्य जिल्लाकि महिलाको उद्धार
अर्को समाचारनेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
गत २४ घण्टामा विद्यालय जाने उमेर समूहका ५२ जना संक्रमित